Restic: inokurumidza, yakachengeteka uye inobudirira backup application | Linux Vakapindwa muropa
Kune dzimwe nzira dzakawanda dzekugadzira backup makopi muGNU / Linux. Ichokwadi ndechekuti runyorwa rwemhando idzi dzeapps rwakakura kwazvo, uye mazhinji acho anoshamisa, asi nhasi tinokupa iwe Restic, yekuraira turu chishandiso icho chinozivikanwa nekugadzira backup makopi kana backups nekukurumidza, zvakachengeteka uye zvakanyanya kwazvo. Chinhu chinokosheswa kana data redu nehurongwa zvichitsamira pazviri.
Isu tinogara tichikurudzira tsigira nguva dzoseSezvo muchiitiko chekuti isu tinorwiswa nerudzikunuro uye kunyorera magwaro edu, kutadza kwechigadziro chekuchengetera, magetsi kudzima, nezvimwewo, tinogona kurasikirwa nedata rakakura zvisingaite. Kana isu tichiwanzoita backup makopi, iyo yakarasika data ichave zero kana, zvirinani, zvishoma. Zvinoita kunge zvakapusa uye vashoma vanogadzira makopi ekuchengetedza, asi kana dambudziko rikauya uye isu tinopera kunze kwavo ndipo patinonyatsokoshesa kukosha kwavo ...
NaRestic isu tine backup program yemahara, isina uremu, yakavhurika sosi, yakachengeteka, yakavimbika, inokurumidza uye multiplatform. Izvo zvakanyorwa muGo mutauro, unokwanisa kunyorera data neAES-256 mune counter mode uye kusimbiswa nePoly1305-AES. Naizvozvo tiri kutaura nezve chishandiso chakavimbika kwazvo maererano nekuchengetedza. Kuti tiise iyo tinokwanisa kushandisa zvese git kuwana kodhi kodhi uye kuinyora kubva kuGitHub, pamwe neakasiyana mamaneja emapakeji eedu anodiwa distro kuisa iyo restic package.
Kana tangoiswa tinogona kusarudza pakati akasiyana kumashure-magumo kusarudza kubva, sekuteedzera kudhairekitori yemuno, kuburikidza neSFTP, pane server yeHTTP REST, AWS S3, OpenStack Swift, BackBlaze B2, paMicrosoft Azure kana paGoogle Cloud Storage. Mune fomati yemuno, tinogona kuita backup seiyi:
Nekutanga isu tinogadzira repository inonzi backups mune yedu Dhairekitori, ipapo ichatibvunza isu password, tinoita backup neyechipiri mune yangu dhairekitori repamba, tinonyora makopi akagadzirwa kuti aone maID, uye neyechitatu tinogona kudzorera tichishandisa ID. Chokwadi ndechekuti une zvakawanda zvaunogona kuita, saka ndinokuraira kuti ona bhuku racho, sezvo ichi chiri chinyorwa chekutanga chete ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Restic - yekushandisa inokurumidza, yakachengeteka uye inoshanda